Voadika ny 10 Oktobra 2012 12:16 GMT
Ho fankalazana ny tsingerin-taona faha-40 ny fifanaraham-piaraha-miasa ao anatin'ny Faribola Franc, dia namoaka taratasy iraisana ny filohan'i Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sy ny minisitry ny vola Frantsay, Pierre Moscovici, hamaranana ny “fitrandrahana tafahoatra ny tahiry Afrikana” [fr]. Taorian'io kabary io dia namoaka fanambarana an-gazety ny Banky Mondialy fa nanangana tahirim-bola hanampiana ny firenena Afrikana hahay hifampiraharaha kokoa ny fitrandrahana ny loharanon-karenany voajanahary. Hita fa tsy ny manasongadina ny tsy fahombiazan'ny governemanta Afrikana hianoka ny loharanon-karenany ihany fa ny tombontsoa tafahoatra azon'ny mpitrandraka iraisampirenena no asongadin'ity fepetra ity amin'ny fomba ofisialy.
Fa ny tanjon'ity fepetra ity ‘hampiroborobo ny fifanarahana ara-barotra marina sy ara-drariny’ no laharam-pahamehana azo raisina amin'ity kabary niarahana ity. Saingy nilaza ihany momba ny fifandroritana taloha nisy teo amin'i Frantsa sy ny zanataniny taloha ity fanambarana tamin'ny mpanao gazety ity. Nanambara [fr] Atoa Ouattara fa :
Soratra miverina: Ireo fehin-dalàna any Madagasikara dia tsy mahafehy ny fampanjariana volabe amin’ny fitrandrahana ny harena ambanin’ny tany · Global Voices teny Malagasy
[…] sy ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena [na FMI] ahafahana manampy ireo firenena andalam-pandrosoana hanatsarany ny fomba ifampiraharahany amin'ny fitrandrahany ireo harena an-kibon'ny taniny. […]
29 Novambra 2012, 03:49